ဆီးချိုရောဂါနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု – Healthy Life Journal
…၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊…
Q. ဆီးချိုရောဂါကို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ကုသလို့ရပါသလား။
A. တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀၊ တစ်ပတ်မှာ မိနစ် ၁၅၀ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ၃၅-၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတိုင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ပုံမှန်ကုထုံးတစ်ခုလို လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သွေးချိုထိန်းသိမ်းမှု ပိုကောင်းလာပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး နေထိုင်လို့ကောင်းစေပါတယ်။
အထိုင်များတာ၊ လှုပ်ရှားမှုနည်းတာကို ရှောင်ပါ။ မဝေးလွန်းတဲ့ခရီးကို လမ်းလျှောက်သွားပါ။ မမြင့်လွန်းတဲ့အထပ်တွေကို ခြေထောက်နဲ့ပဲ အတက်အဆင်းလုပ်ပါ။ အိမ်ရှင်မတွေ အိမ်အလုပ်ကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်ကိုင်တာ၊ ခြံထဲမှာ ပေါင်းမြက်သုတ်သင်ရှင်းလင်းတာတို့ကို လုပ်ဆောင်ရင်း လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတိထားသင့်တဲ့ တခြားအချက်တစ်ခုက ပြုံးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းအောင် ကြိုးစားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Items:Diabetes, Diabetes Mellitus, Physical Exercise